ABADLALI BE 'STAR TREK' ABASEBENZA NGEEOGS ZOKUKHANGELA EMAJUKUJUKWINI - IINDABA
Abadlali be 'Star Trek' abasebenza ngeeOgs zokuKhangela emajukujukwini
Ukusukela oko yaqala ngo-1966, i-Star Trek ibimalunga nokuhlola. Umenzi wefranchise, uGene Roddenberry, wayecinga ngekamva apho abantu bengacothiswanga bubuhlwempu, yindlala, okanye yimfazwe. I-teknoloji inikezela yonke indawo abayifunayo. Ke, bathabathe ii-celebs ukuze bafumane elidlulileyo kwilizwe labo.
Nangona ingengabo bonke abadlali beTrekverse abonwabileyo ngendawo, uninzi lwabo belunqwenela ngamandla ukufumana umsebenzi kwiStar Trek ngenxa yeenjongo zabo zokuhlola umhlaba omtsha ongaqhelekanga. Inani labadlali beStar Trek bandise ukomelela kwabo kudlula iTrekverse ngokusebenza neenkampani kunye nemibutho efumanisa indawo.
Nazi iinkwenkwezi ezi-4 zeTrek ezifuna ubomi obutsha kunye nempucuko entsha kubomi benene.
Emva kokonwabela uLieutenant Uhura kwi-Star Trek: I-Original Series Series kancinci, uNichelle Nichols wayengenathemba lokuba unqwenela ukuqhubeka kumdlalo. Wayengonwabi malunga nendlela ebalaseleyo yokubhalwa komlinganiswa wakhe. Nangona kunjalo, uGqirha Martin Luther King Jr. ucele ngokwakhe uNichols ukuba ahlale kumdlalo. Wamyalela ukuba ubonakalisa itekhnoloji epheleleyo enokuthi amantombazana amnyama abe kwibhulorho yeenkwenkwezi. Wongeze ngelithi waye ligorha leentombi zakhe.
Ke, uNichols wahlala kwiStar Trek. Uye waphinda wajika waba ngummeli wezwi ngaphakathi kwenkqubo ye-NASA. UNichols wenza intetho kwindawo ayicelileyo iNASA, Baphi abantu bam?
I-NASA yafumana umyalezo ngokuvakalayo nangokucacileyo. Inkampani icele uncedo lukaNichols kwimizamo yabo yokufuna. Wenza iimuvi zokugaya inkqubo yendawo, wahamba kulo lonke ilizwe ecenga izikolo ukuba ziphakamise abantu ngombala wenkqubo yendawo, kwaye wathetha nabantu abanokubafumana ukuze babacenge ukuba basebenzise.
I-NASA iwonge umsebenzi kaNichols ngokuwufumana 8,000 abantu ngombala kwinkqubo yommandla ngenxa yeshumi elinethoba lamashumi asixhenxe.
Ukufuna ukwazi kukaRobert Picardo ekuhlolweni kwendawo kwaqala kudala ngaphambi kweStar Trek, kwaye kwanzulu ngalo lonke ixesha lakhe onwabela ugqirha kwiStar Trek: Voyager. Ngo-1999, wajika waba lilungu leBhunga eliCebisayo loMbutho wePlanethi, iqumrhu elenza ukuba kuphononongwe indawo.
Egameni leqela, uPicardo uye wacela iCongress ngenkxaso mali kunye nolungelelwaniso lokugubungela olunceda ukuphononongwa kwendawo. Ukongezwe ngokusebenza noBill Nye (ngokuqinisekileyo, indoda yesayensi) yokunyusa ukuqonda ngokubhekisele kwimfuneko yendawo yokukhuthaza.
Umdlandla kaPicardo wokuhlola indawo ugxile kwingcinga efanayo kunye nogqirha uRoddenberry wayenayo - edibana neentlobo ezivela kwiiplanethi ezahlukeneyo. UPicardo unomdla malunga nemvelaphi yobomi kunye nobomi kwiiplanethi ezahlukeneyo iminyaka emininzi. Umsebenzi wakhe noMbutho wePlanethi yinxalenye yemishini yakhe yokwenza ukuba uluntu lube selulungiselelwe unxibelelwano lokuqala, ngalo lonke ixesha kusenzeka.
NjengoPicardo, uthando luka-Anson Mount lokuhlola indawo lujikeleza ngokufumanisa ubungqina bobomi kwiiplanethi ezahlukeneyo. Ngo-2020, wajika waba lilungu leBhodi yaBalawuli kwi-METI. Injongo yeqela kukuthetha ngobomi basemzini. Itayitile imele ukuBhekisa kubuNgcaciso boLwazi oluNgaphaya kweTerrestri. I-METI iqhuba kwaye ihlalutye imali kwizicwangciso zonxibelelwano, isayensi esebenzisiweyo, kunye nezicwangciso zosasazo ezinokuthi zibe nesiphumo sokufunyanwa kobomi obungaphezulu komhlaba.
U-Mount uyalele u-Cola ukuba uyakholelwa ukuba uluntu lusondele kunanini na ngaphambili ekufumaneni nasekuthetheni ngobomi basemzini. Ngoku izazinzulu ziye zamkela iiplanethi ezinokubandakanya amanzi, nto leyo ebaluleke kakhulu ekukhathaleleni ubomi, iMETI iyayazi le ndawo ukuba ijolise kwimiyalezo yayo.
Kumashumi eminyaka emva kokuba uNichols evule eyona ndlela ibalaseleyo yabantu abanemibala kwi-NASA, uS Star Trek alum uTim Russ ulandela ekhondweni lakhe. Ngo-Agasti ka-2021, e-USA Today uxele ukuba uRuss uyifumene i-asteroid kwaye usebenza ne-NASA ukucwangcisa umsebenzi wokuhlola.
URuss ube sisazi ngeenkwenkwezi se-novice iminyaka, njengoko wayechaza kwi-costar yakhe, uPicardo, kwividiyo yoMbutho wePlanethi, onokuthi uqatshelwe apha ngasentla. Umnqweno wakhe wajika i-avocation xa yena kunye ne-5 eyahlukeneyo ye-hobbyists basebenzise ubuchule babo beenkwenkwezi ukufuna i-asteroid kwi-orbit kaJupiter, ebizwa ngokuba yiPatroclus.
URuss ngoku usebenza ne-NASA ukuthumela inqanawa, egama linguLucy, kwii-asteroids ezijikeleza iJupiter. Inkampani inethemba lokuphanda ngokwenziwa kwemichiza kweeasteroids ukuze ifumane ulwazi malunga nendawo eza kuvela kuyo i-asteroids kunye nendawo ebekuyo ngaphambili kunokuba zibanjiwe kwi-Jupiter.
I-nikki bella net efanelekileyo ngo-2015
Umatshini umpu kelly hairline
U-elena davies ubhuti omkhulu
Ngubani uCheryl scott oganelwe